RASMI: Paul Pogba oo ku dhawaaqay Kooxdiisa cusub!! – Gool FM
(Manchester) 12 Agoosto 2020. Xiddiga kooxda Manchester United ee Paul Pogba ayaa ku dhawaaqay inuu ku biiray kooxdiisa cusub ee ciyaar gacmeedka Call of Duty, isla markaasna lagu magacaabo ‘Verdansk FC’.
Taageerayaasha Man United ayaa ka akhbaar sugayay inuu shaaciyo inuu heshiis cusub qallinka ugu duugayo kooxda ka arrimisa garoonka Old Trafford, balse waa ay layaabeen ku dhawaaqista kooxdan cusub ee lama filaanka ah.
Xilli xiddigan Faransiiska ah qandaraaskiisa Manchester United uu ka harsan yahay wax ka yar hal sano, waxaa si aad ah loo hadal hayay inuu qallinka dul dhigo heshiis cusub oo uu kula sii joogayo kooxda ugu hanashada badan horyaalka Ingiriiska, kaddib markii ay xaqiijiyeen ka soo qayb galkooda tartanka Champions League fasal ciyaareedka dambe.
Pogba ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray Talaadadii aynu ka soo gudubnay “Berri”, isagoo soo raaciyey emoji indho furan ah, taasoo uu ula jeeday berri indhaha igu haya, waxaana maanta oo Arbaco ah uu shaaciyay xaqiiqda ah inuu ku biiray Call of Duty.
Verdansk waa magaca qariirad ka mid ah ciyaar-gacmeedka ‘Call of Duty Warzone’ kaasoo ay malaayin qof ay ku dagaallamaan si ay u noqdaan midka ugu dambeeya si uu u guuleysto.
Dadka ku taqasusay ciyaar-gacmeedka xabbadda ah iyo dadka abaabulay ayaa ku naadi noqday Pogba, taasoo u muuqata inay suuq geyn u tahay shirkadda ciyaar-gacmeedka iska leh ee Activison.
Taageerayaasha laacibkii hore ee Juventus ayaa ku jahwareeray ku dhawaaqista cusub ee uu sameeyay, iyagoo qaarkood u fahmay inuu ka huleelay Red Devils, waxaana ay qaybta faallada ku soo qoreen su’aalo iyo haddallo kale oo ay ku muujinayaan faham-darrada ka heysata sheekadan cusub.
Pogba ayaa xilli ciyaareed jahwareer ah qaatay fasalkan 2019-20, isagoo ciyaaray kaliya toddobo kulan inta uusan galin qalliinkii anqowga ahaa ee bishii Jannaayo kaasoo soo koobay waqti ciyaareedkiisa.
Hase ahaatee, waxa uu ku mahdinayaa xanuunkii kubadda cagta iyo dunidaba hakadka galiyay ee Korona Fayras, kaasoo 27-jirkan u saamaxay inuu soo kabsado, qayb lixaad lehna ka qaato in Manchester United ay iska soo xaadiriso tartanka Koobka horyaallada Yurub xilli ciyaareedka dambe.
Waxa uu sidoo kale soo bandhigay is-fahan wanaagsan oo uu garoonka gudahiisa kula qaadanayo Bruno Fernandes, iyagoo wada jirkooda ku soo jiitay taageerayaasha Man United iyo macallinkooda Ole Gunnar Solskjaer.